Nzvimbo dzekugara Krisimasi inoshamisa muna 2022 | Absolut Kufamba
Nzvimbo dzekugara Krisimasi inoshamisa
Alberto Makumbo | | Amsterdam, Canary Islands, Caribbean, USA, España, Philippines, Holland, Madrid, Morocco, Mekisiko, New York, Prague
Kana nguva yechando ichisvika, kutonhora kunosvika, macnutnuts akagochwa uye hongu, zvakare Krisimasi. Bato rine mukurumbira pasi rose haringori chete zuva rakakodzera kuve nemhuri asiwo kufunga nezverwendo kana iwe uri kutsvaga kutiza zvakajairika zvekudya kwemanheru uye kunakidzwa nemitengo yemakwikwi yeimwe nzvimbo. Gore rino, dai Santa Claus akakutsvaga mune izvi zvinotevera nzvimbo kwaunogara yeKisimusi inoshamisa.
Muvakidzani anoshamisa weEuropean ave achizvisimbisa iwo ega seimwe yenzvimbo dzinonyanya kufarira mairi kunakidzwa neKisimusi inoshamisa. Yakazadzwa nemaguta eumambo akarohwa nemhirizhonga yemabazaars, nzira dzemadzinza kuburikidza neAtlas uye epic misasa musango reSahara, Morocco izere nezvishamiso kune avo vari kutsvaga yakasarudzika mwaka weKisimusi. Kudonha Marrakech, ayo mapindu uye souks, kuti ubatanidze nemataundi egungwa senge Essaouira uye usvike murenje kana, tsime, ongorora kuchamhembe kwenyika kuburikidza nenhema Fez neMeknes kuti vaswedere pedyo neCauen, guta rinonakidza rakapendwa nebhuruu uye rakateyiwa pakati pemakomo.
Ndiani asina kurota nezve a Krisimasi muNew York? Unogona kusvetana nechando paRockefeller Center uye padyo nemuti wayo muhombe kupedzisa kuColumbus Circle, muCentral Park, kurasika mumusika weKisimusi unosanganisira zvinosvika zana sitendi, zvinonzwika zvakanaka, handiti? Kana zvisiri, iwe unogona kugara wakamirira Evha Idzva Idzva iyo inosvika pakakwirira kwazvo pano nekuda kweEvha yeGore Idzva rakapembererwa muTime Square ichiteverwa nemutambo wemwenje unoshamisa kubva kunzvimbo shanu dzakasiyana dzeguta.
Vanoti Santa Claus anomirira gore rese mufekitori yakarasika kwaanoshanda nemagokora ake vachiita zvipo zvese zvichasvererwa kuburikidza nechimney manheru eKisimusi. Nhau dzakanaka ndedzekuti nzvimbo ino iriko uye iri munzvimbo iri pedyo ne Rovaniemi, guta riri muFinnish Lapland iri musha kune yakakurumbira Santa Claus Village, iyo enclave uko iwe kwaunogona kuwana iyo fekitori uye imba yeakakurumbira murume mukobvu munyika inoteverwa nekugara mumigloos, sleigh anokwira kana, kunyanya, kuona kweimwe yeanonakidza kwazvo masikirwo epanyama pasi: Mwenje yekuchamhembe!
Uri kutsvaga Kisimusi inoshamisa munzvimbo yakasiyana zvachose here? Saka haufanire kuenda kune rimwe divi renyika uchizvitsvaga: Canary Islands iparadhiso maawa maviri chete nendege, yakanakira zororo risingaite. Uye kunyangwe zvitsuwa zvaro zvese zvichikurudzirwa, isu tinosarudza Fuerteventura, "mahombekombe eCanary Islands", ayo anokukoka iwe kuti utore chando kunyura muAtlantic pamberi inorasika mumakomo ayo ekurara, mataundi egungwa akaita seCorralejo kana mahombekombe akaita seCofete, iyo inomutsa paradhiso isingagumi.
Pamhemberero dzese dzeKisimusi pasi rose, Philippines 'ndiyo yakareba kupfuura dzose. Kubva kutanga kwaGunyana kusvika Ndira 6, nzvimbo yezvitsuwa yeAsia izere nemhemberero uye mafaro anokanganisa ngano dzenyika nekufurira kweSpanish, achizadza migwagwa nemataundi eiyo jogirafi. Chikonzero chakakwana che enda kunzvimbo inopisa kunodziya, mahombekombe akaita seEl Nido kana zvitsuwa zvinonakidza senge inofara Bohol inoumba paradhiso yemanzwiro ayo mitengo (kusanganisira iyo yekufamba nendege) inonyanya kudhura mukati memwedzi iyi.
Guta guru reCzech Republic rinoenderera mberi kuva nzvimbo yakasarudzika yekutarisa maziso ese nguva yeKisimusi painosvika. Inozivikanwa yeakakura Misika yeKisimusi inoitika muGuta Rekare (kusanganisira hombe yekuzvarwa kwaJesu), uchipfuura neyemumhanzi konzati dzePrague Opera kana migwagwa yayo yakashongedzwa kuti ufambe newaini yakawandisa iri muruoko, Prague iguta rakanakira kuzorora kweKisimusi kwaunogara uchifanira kuita. Chinhu chekushamiswa nacho.
Iyo hofori yeMexico ishamwari yakasarudzika yemarudzi ese ehurongwa hweKisimusi. Kana iwe uchida kutora mukana wemitengo yakadzikiswa yemahotera ayo uye zviitiko muRiviera Maya, hapana zvirinani pane kutora nendege uye kugashira gore idzva pakati pemaguta ezuva, mahombekombe, cenotes uye matongo eMayan. Zvikasadaro, iwe unogona kugara uchisarudza kutonyanya kushanya kwakadai seguta re San Miguel de Allende, uko makenduru, piñatas uye magirazi echibhakera anodziisa yakasarudzika Krisimasi yakaratidzirwa neyakajairika zvinozivikanwa nyika yemariachis.
Kukomba kwemabiko emhuri? Maawa nemaawa kugadzira huku yakabikwa pamwe chete nekudya kwemanheru kwese? Kana iwe uri kutsvaga kuti utize kubva kuKisimusi gore rega, Amsterdam ingangove yakanyanya kunaka sarudzo. Zvakajairika uye zvakasarudzika, iro guta reDutch riri pakati migero yayo, zvitoro zvekofi uye zvinokwezva zvetsika chikonzero chakanakisa cheKisimusi inoshamisa yekuzadzikisa misika yeKisimusi, makonzati emimhanzi ekare asi, kunyanya, iyo show inonzi inonzi Mwenje mutambo iyo inofashamira pakati peguta nemwenje ye LED kubva kupera kwaNovember kusvika kutanga kwaNdira. Pini yekuchengetedza.
Guta reAustria iriwo rimwe remaguta eEuropean akakodzera kuti arasike mukati memazuva aZvita nekutenda kune dzakasiyana siyana sarudzo: unogona kushanyira misika yayo yeKisimusi uye unakirwe neyemhando yekonzati yemimhanzi muguta kwakaberekerwa Mozart, pakati pevamwe mikana. Saizvozvowo, kana iwe ukafamba pane chero evhiki pakati peKisimusi, unogona kushamisika neiyo Krampus Anomhanya mutambo, chiitiko chinotarisana neyakajairika dhimoni remuno rinoshanda sechinhu chakavanzika kune vamwe vemuno vanoita nzira yavo nekurova.
Mufananidzo weMirador Madrid
Guta guru reSpain rinogara riri sarudzo yakanaka kana zvasvika pakusangana neKisimusi izere nezvishamiso: famba mumisika mizhinji, fungisisa nezvakashongedzwa, uve nemabiko eKisimusi mumabhawa ane fashoni kana, zvirinani zvakadaro, mirira Zvita 31 mune iyo iyo iyo Gedhi reZuva inova inzvimbo inoyevedza muSpain. Nekuti hongu, iwe unoziva kuti iwe waigara uchida kupedza kupera kwegore uchidya mazambiringa mumoyo wenyika.
Ndezvipi izvi nzvimbo dzaungazogara Krisimasi kushamisika?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Nzvimbo dzekugara Krisimasi inoshamisa
Chii chekuona muMilan nezuva rimwe